Umkhuleko ku-Anima Yedwa Ukwenza Umuntu Aze [+]?
Umkhuleko emphefumulweni kuphela ukwenza umuntu ukuba eze Kungaba leso isikhali esiyimfihlo esisisiza kulezo zikhathi lapho kungekho khona omunye umuntu ongakwenza.
Ngalezo zikhathi esifisa ngazo ngawo wonke umphefumulo wethu ukubona lowomuntu kodwa asazi ukuthi kufanele enze kanjani noma kanjani ukuthi kube nguye ozinqumayo ukuthi uzosibona, lo ngumthandazo ongaba wusizo kithi ngalo mzuzu.
1 Umkhuleko emphefumulweni owedwa ukwenza umuntu afike Yini?
1.1 Umkhuleko emphefumulweni kuphela ukwenza umuntu ukuba eze
2 Ngingakhuleka nini?
3 Ingabe lo mthandazo unamandla?
Umkhuleko emphefumulweni owedwa ukwenza umuntu afike Yini?
Kukhonza kakhulu ukwenza lowomuntu woza usihlangabeze ukumenza akhulume nathi.
Isidingo esakhiwe kulowo muntu ukusibona sikhula kuze kufike ukusivakashela asinakugwenywa.
Ithuluzi elinamandla esingalisebenzisa ngokukholwa nganoma yisiphi isikhathi esifunayo, noma ngabe liyinsuku zonke.
Anima Sola, ngcwele yami ebusisiwe, ngiyakucela ngokholo olukhulu ukuthi wenze lo muntu ...
(igama eligcwele lomuntu)
Ngibuyele ezingalweni zami, ukuthi kusukela namhlanje nginomuzwa wokuthi sisahlanganiswa yizibopho zothando, ngiyakuncenga, amandla akho amakhulu ukubuya ngenhliziyo evulekile kimi nokuthi akukho okukususa kude nami, ukuthi uqhubeke ungithande emphefumulweni, emzimbeni nasemoyeni , kusukela manje kuze kube phakade.
Ngiyanxusa kulomkhuleko emphefumulweni kuphela ukuba wenze umuntu eze, Anima Alone, ungiboleke usizo lwakho.
Ngiyakuncenga, ngalo lonke ukholo lwami, u-Anima Alone, ukuthi wenze, ngesipho sakho esiyisimangaliso, ukuthi umuntu engimthanda kangaka ubuyela ngami, ngenhliziyo egcwele uthando nokuqonda, ngalokho.
Zibonge wena wedwa, ngingcwelisela lomkhuleko kuwe, osususele kude nami, ngiyakuncenga, ungangikhohlwa, ukuthi ngihlala ngisemqondweni wakho.
Futhi ngiyakwethembisa ukuthi uma nje lo muntu ebuya,, Ngizokwenzela okulandelayo, _ngiyabonga
Khumbula ukuthi ayikho indawo ethize, usuku noma isimo sokwenza lo mkhuleko.
Kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi noma indawo.
Uma ufuna ukukhanyisa ikhandlela noma wenze umkhathi omncane ngaphambi kokuthandaza, kulungile, kepha lokho ngeke kwenze ukuthi umthandazo ube mncane noma ube namandla amakhulu.
Ekhethekile ukukwenza ezimweni lapho kukhona ilungu lomndeni elahlekile noma lathunjwa futhi lisebenza nakwezinye izilwane ezifuywayo.
Amandla nokusebenza kwalo mthandazo kuyamangaza noma ngabe kunzima kangakanani ngalesi simangaliso.
Kufanele sithandaze nsuku zonke. Kufanele sibe nokholo emithandazweni futhi sikholwe.
Uma singenalo ukholo ngeke sinakekelwe.
Ucabanga ukuthi kuzokuhambela kahle. Ukuthi othile uzokuzwa futhi asize esicelweni sakho.
Vele uthandaze kanye ngosuku, ngokholo namandla. Esikhathini esifushane i-oda lakho lizohanjelwa futhi uzojabula.
Uma ufuna, khanyisa ikhandlela elimhlophe noma ikhandlela elibomvu ukubonga.
Amakhandlela akhonza kuwo ukunikela kulezo zinto ezisisiza emiyalweni yethu.
Kuyinto elula, kepha isebenza kakhulu.
Ingabe lo mthandazo unamandla?
Izwe Okomoya kuyinto yangempela esizungezwe yiyo futhi iqiniso lokuthi asifuni ukulithatha ngokungathi sína akusho ukuthi alikho, yingakho ukwenza lawo mathuluzi kamoya kube ngamandla ethu.
I-Las imithandazo eyenziwe ngomphefumulo iza namandla akhethekile ngoba akukho okufana nokuba qotho lapho ukhuluma nesidalwa esingokomoya.
Yikho lokho umthetho ogcwaliseka ngayo yonke imikhuleko eyenziwa empilweni, noma ngabe ngubani, kufanele ngaso sonke isikhathi kwenziwe ngokholo ngoba yiso kuphela isidingo esiqinisekisa ukuthi umthandazo uzothola impendulo.
Thandaza umkhuleko emphefumulweni kuphela ukwenza umuntu eze nekholo. Konke kuzolunga.